#Xasan Sheekh oo si kulul u weeraray Madaxda Dowlada Soomaaliya | Get Latest News From Horn of Africa |
#Xasan Sheekh oo si kulul u weeraray Madaxda Dowlada Soomaaliya
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si kulul u dhaliiyay Dowlada Soomaaliya asagoo arrimo dhowr ah ku eedeyay.
Xasan Sheekh oo maanta ka hadlay xaflada furitaanka xarunta xisbiga uu hogaamiyo ee UPD, ayaa dowladda u madaxweynaha ka yahay Maxamed C/llaahi Farmaajo ku eedeyay caburin iyo cabsi galin ay ku heyso Siyaasiinta iyo Xildhibaanada.
Xasan Sheikh Maxamuud, ayaa sheegay in Madaxda Dowlada ay dhibaato ku hayaan baarlamaanka, maamul goboleedyada, Xisbiyada kala duwan ee dalka iyo hay’adaha caalamiga ah, taasi oo keentay caburin ay kala kulmeen dowladda.
Wuxuu tusaale usoo qaatay culeesyada ay dareemayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo maamul goboleedyada dalka, isaga oo sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay talaabo ka qaataan arintaasi.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in dowladda hada jirta ay ku xad gudubto waxa uu ku tilmaamay aragtida xurta ah ee kasoo hor jeeda masuuliyiinta talada dalka haya.
Wuxuu sidoo kale sheegay in xaaladda hadda dalka uu ku jiro inay tahay cabsi iyo Cariiri soo wajahay siyaasiyiinta iyo xubnaha dowladda Soomaaliya, taasina ay dhibaato kale keeni doonto.
“Ciriiriga iyo xabsida kaliya ma saameyneyso siyaasiyiinta oo kaliya oo waxay sidoo kale saameyneysa shacabka, Tii wadada dhinaceeda Shaaxa ku gadeysay, kii gaari gacan ku shaqeynayay iyo kuwa baabuurka wax ku daabula ayaa caqabad la kulmay”ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud.
Culeesaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayuu sidoo kale sheegay inay saameysay hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho, maadaama loo diiday inay siyaasiyiinta ku shiraan.
Xasan Sheekh ayaa hogaamiye u ah Xisbi ay ku jiraan Xildhibaan shaqo ka dhigtay in ay dhaliilaan talaabo kasto oo dowlada qaado sax ama qalad.